Global Voices teny Malagasy » Tsy Mahalala Firy Ny Momba An’i Filipina ? Ireo Tsara Ho Fantatra Ho An’ireo Vao Sambany Hitsidika Anay · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Desambra 2014 15:46 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Candy
Sokajy: Filipina, Tsidika
Misy hetsika lehibe telo hitranga any Filipina amin'ny volana Janoary 2015 : Ny fahatongavan'ny papa ray masina François any Manila sy Leyte; ny fankalazàna ny fetibe Sinulog any Cebu; ary mazava ho azy, ny Vovonanana Iraisam-pirenena ataon'ny Global Voices  any Cebu ihany koa.
1. Ny Filipina dia andia-nosy any atsimo-atsinanan'i Azia. Nosikely 7.107 no mamorona azy, ary anisan'ny manana morontsiraka lava indrindra maneran-tany izy. Misy vondrona nosy telo lehibe ao : Luzon, izay misy ny renivohitra Manila; Visayas (Cebu dia ao afovoan-tanin'i Visayas); ary Mindanao, nosy any atsimo izay silamo ny ankamaroany. Maro ireo gazetiboky no nandahatra an'i Boracay  sy Palawan  ho anisan'ireo nosy tsara indrindra maneran-tany.
2. Ankoatra an'i Timor atsinanana dia ny Filipina irery no firenena be Katolika indrindra any Azia. Ny fivavahana Katolika dia lova avy amin'i Espana, satria ny Filipina dia zanatany espaniôla nandritra ny 300 taona mahery. Rehefa nahazo ny fahaleovanteny nandritry ny fotoana fohy izy tamin'ny taona 1898, dia lasa zanatany Amerikana indray hatramin'ny taona 1946. Araka ny lazain'ny Filipiana sasany mba hanazavàna ny fanjakàn'ny fivavahana Katolika sy ny lazan'ny  teny Anglisy any amin'ny nosy: Nandany 300 taona tany amin'ny masera izahay ary 50 taona tany Hollywood”!
Miandry mafy ny fahatongavan'ny papa  amin'ny volana ambony any Manila sy Leyte ireo Filipiana katolika. Efa nanambara sahady Manila fa andro tsy fiasàna ny 15-19 Janoary any an-toerana, ary nanipy teny  koa ny fitondràna fa mety hamoaka andro tsy fiasàna koa izy mba hahafahan'ireo Filipiana mijery sy mandray anjara amin'ny hetsika iarahana amin'ny Papa.
Any Visayas, Cebu  no foibe ara-toekarena lehibe. Iray amin'ireo faritany 80 any amin'ny firenena izy, ary anisan'ireo be mpizahatany. Any Cebu City, renivohi-paritr'i Cebu no hatao ny vovonana iraisam-pirenen'ny GV.
4. Noho izy ao amin'ilay antsoina hoe Faribolan'ny Afo n'ny Pasifika (Ceinture de Feu), matetika tratry ny rivodoza mahery, horohorontany, ary fipoahan'ny volokano ny Filipina. Nalaza eran-tany ny nosy Leyte sy Samar tamin'ny taon-dasa noho izy ireo tratran'ny rivomahery Haiyan  (fantatra any an-toerana amin'ny anarana hoe Yolanda), rivodoza tropikaly mahery indrindra tamin'ny tantaran'izao tontolo izao.
5. Tsy misy atahorana ny fitsidihana an'i Cebu. Misy taxi soa aman-tsara (tsy misy fiara an-dalamby ao Cebu) manerana ny tanàna. Ary aza adino ny mitaingina ny jeepney , fiara fitateram-bahoaka malaza sy mampiavaka ny firenena.
Ary vantany vao migadona ao Manila na Cebu ianao, dia mahazoa fahafinaretana satria izay no teny filamatry ny firenena amin'ny lafiny fizahantany: #mahafinaritrakokoa  any Filipina. Amin'ny volana ambony mihaona e!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/12/28/66740/
 Vovonanana Iraisam-pirenena ataon'ny Global Voices: https://summit2015.globalvoicesonline.org/
 fahatongavan'ny papa: http://papalvisit.ph/
 nanipy teny: http://www.philstar.com/headlines/2014/12/15/1402761/palace-may-declare-papal-visit-holiday
 Faribolan'ny Afo: http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_of_Fire